Sidee baan ku codsan kulliyadda? | Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo dadka ajnabiga | USAHello
Aadista jaamacadda waa tallaabo xiiso nolosha, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo. Waxaa muhiim ah in aad ka dhigaa arji wanaagsan college. Read ku saabsan shuruudaha college, noocyada kala duwan ee jaamacadda, iyo sida loo buuxiyo codsiga kuliyadaha a.
In USA, dadka inta badan odhan “college” ama “dugsiga” jaamacad iyo waxbarashada kale ee dugsiga sare ka dib. Helitaanka kuliyadeed galay waa geedi socod dheer. Waxaad kordhin kasraa fursadaha aad by waxbarasho adag iyo in si firfircoon dugsiga sare. Xitaa haddii aad tahay arday weyn oo si wanaagsan at hawlaha, waxaad weli u baahan tahay inaad codsiga wanaagsan college. Waxa weeye geedi socod dheer. First waa in aad ogaado nooca koleejka ama jaamacadda aad rabto in aad ka qayb. Dulqaad iyo aad u hesho macluumaad sax ah diyaar. Waxay kaa caawin doona inaad hesho dugsiga aad rabto in aad.
Bilow diyaarinta dugsiga sare
Bilow diyaarinaya inta aad dugsiga sare. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo fasalada fiican dugsiga sare. Waa in aad ka qayb qaato hawlaha dheeraadka ah qaadato, aad. Tani waxay ka dhigan kooxaha, ciyaaraha, iyo fasalo dheeraad ah. Kulliyadaha sidoo kale eegi doonaa shaqada iskaa aad. Waxay rabaan in ay ogaadaan in aad tahay “sidoo fekrado”. Taas macnaheedu waa in aad ku guulaysato in waxyaabo badan oo, ma ahan oo keliya dugsiga.
shuruudaha gelitaanka College
In la dhigo kulliyad laba sano, afar sanno college, ama jaamacad, waxaad u baahan doontaa shahaadada dugsiga sare. Haddii aadan u qalin jebiyaan dugsiga sare, waxaad qaadan kartaa imtixaanka dugsiga sare u dhiganta halkii. Tan waa baaritaan dheer oo ku saabsan dhammaan mawduucyada kala duwan ku baray dugsiga. Haddii aad ku gudubto, waxa uu muujinayaa aad leedahay waxbarasho ku filan inay kuliyad galaan.
Waxaad ka kasban kartaa shahaado u dhiganta dugsiga sare (loo yaqaan GED® ama HiSET ama TASC) kulliyadaha bulshada. Sidoo kale waxaad tagi kartaa fasalada fiidkii muhaajiriinta iyo qaxootiga, ama aan iska fasalka diyaarinta GED free.
Nooca college in aan codsado?
Waxaa jira fursado badan oo uu ka soo xusho college. Meesha aad tagi ku xirnaan doontaa waxa aad rabto inaad wax ka barato iyo inta lacag ee aad isticmaali karto. Waxaad u baahan doontaa in aad ka fikirto haddii aad rabto in aad guurto ama uu qoyskaagu.
Kuleejooyinka bulshada diiradda saaraan xirfadaha mustaqbalkiisa. Ardayda ka qalin jabiyaan jaamacadaha bulshada inta badan u helaan shahaadooyinkooda ama darajo associate. Associates degrees qaadan ku dhawaad ​​laba sano oo waxbarasho. Kuleejooyinka bulshada caawin kara ardayda ay helaan xirfadaha muhiimka ah si ay u bilaabaan shaqooyinka bixiya mushaarka nool a. Taas macnaheedu waxa weeye wax kasta oo shaqo lacag ku filan oo loogu talagalay dadka. mushaharka ku nool ayaa sidoo kale ka dhigan tahay ma waxaad u baahan tahay lahaa laba shaqo ama gargaar oo ka socda dawladda. Kulliyadaha bulshada qaar ka mid ah ay leeyihiin barnaamijyo lagu caawiyo ardayda kala iibsiga si ay afar sano ee kuliyad.
Kuleejooyinka bulshada waa yar yahay jaamacadaha. Waxay yihiin labada magaalooyinka yar yar iyo magaalooyinka waaweyn. kulliyadaha Community ardayda ka qayb waqti-dhiman. Waxa kale oo ay ka jaban tahay Jaamacadaha yihiin.
College iyo jaamacad
Dad badan oo Maraykan tago kulliyad afar sanno ah ka dib markii ay ku dhameysan dugsiga sare. jaamacadda A waa college aan bixisaa oo kaliya undergraduate (bachelor ee) degrees laakiin degrees post-graduate aad (sayidkiisa ama PhD). Shahaadada koowaad iyo labaad ee sayidkiisa kaa caawin doona inaad shaqo fiican hesho marka aad u qalin jebiyaan.
Afar sano kulliyadaha iyo jaamacadaha waa adag tahay si aad u hesho ka badan kulliyadaha bulshada. Waa inaad ka gudubto imtixaanka oo inay soo galaan. Baaritaanka ugu badan ee aad u baahan tahay si ay u noqotay waxaa lagu magacaabaa SAT. Waxaa Iagu aad reading, qoraal, iyo xirfadaha xisaabta.
Kulliyadaha noqon karaa dugsiyada gaarka ah ama dadweynaha. kulliyadaha gaarka ah wax badan oo lacag badan kulliyadaha dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, kulliyadaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay lacag deeq dheeraad ah oo la heli karo. Waxay leeyihiin fasallo yaryar si ay ardaydu u helaan in ay macalimiinta ka badan la hadal.
Sida loo codsado iyo buuxinta codsiyada college
Waxaad bilaabi kartaa buuxinta codsiyada college ee October sanadkii ka hor inta aad rabto in aad bilowdo college. codsiyada College waxay u baahan yihiin in la dhameeyo January. Waxay qaadataa waqti dheer in la buuxiyo codsiyada. Waa in aad hore u bilaabaan iyo buuxi 6 in 8 codsiyada.
codsiyada College kharash ah oo ku saabsan $40 kasta, sidaas oo kaliya dalban dugsiyada aad runtii jeceshahay. Kulliyadaha in lagu yaqaan oo haysta waxbarashada ugu wanaagsan ee uu noqon karaa mid aad u tartan rasmi ah. Taas macnaheedu waa in arday badan codsan laakiin badankoodu ma heli. Haddii aad codsanayso in dugsiyada aad u tartan rasmi ah, laga yaabaa in aad rabto in aad dalbato in dugsiyada qaarkood yihiin in si sahlan si aad u hesho sidoo kale. Tani waa ay dhacdo in aad u hesho ma aadan gelin doorashooyinka ugu horeysay.
Haddii aad ogtahay oo college aad rabto in aad ka qayb, waxaad eegi kartaa website-keeda in ay bartaan oo ku saabsan sida loo codsado. Tani waa waxa aad u baahan tahay:
foomka codsiga online buuxiyey-out A
War qoraal ah oo shakhsi ahaaneed: tani waa curis ah oo ku saabsan sababta aad u rabto in aad dugsiga aado. Sidoo kale waa fursad in ay ka hadlaan oo ku saabsan xirfadaha iyo fasalada.
Laba ama in ka badan warqado ammaan ah in: waraaqaha ka yimid macalimiinta ama dadka aad u shaqaynaysay. waxay ku odhan doonaan sababta dugsiga waa in aad ha.
minguursan ee dugsiga sare
dhibcaha imtixaanka: jaamacad, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato imtixaanka SAT ama ACT ah. Kuwani waa baaritaan ku saabsan dhammaan maadooyinka aad ku baratay dugsiga. score fiican kaa caawin doona inaad hesho college galay
Haddii aad hesho in
Waxaad ka heli doontaa warqad ama email u sheegay in aad heshay. Tani waxay dhici doona inta u dhaxaysa 1-da March oo 1-dii May. Haddii aad heshay galay in ka badan hal dugsi, waxaad u baahan doontaa inaad go'aan ka halkaas oo si ay u tagaan. Ka fikir kharashka, goobta, iyo sida wanaagsan ee waxbarashada waa. U sheeg ka haa dugsiyada ama ma sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. Qaar ka mid ah ardayda ka heli on liiska sugitaanka, taas oo macnaheedu yahay waxay heli doontaa oo kaliya bar haddii uusan qof kale doonayaa in aan kooda ahayn. Jawaabno hore caawin doona ardayda kale (ama aad) aqaano hadii ay socon karaan dugsiga in.
Haddii aadan helin in
ardayda qaar ka mid ah ha ka heli ma college galay sannadka ugu horreeya waxay codsan. Haddii aadan helin in, waxaa jira fursado.
kulliyadaha qaar ka mid ah oo bixiya ogolaanshaha rogid. Taas macnaheedu waxa weeye in aanay aqbali ardayda oo dhan hal mar. halkii, ay aqbalaan ardayda mid ka mid waqti ilaa dhibco dhan waa jiheysteen. Haddii ay jiraan dhibco ka tagay, waxaad codsan kartaa in dugsiyadan guga goor dambe ama xagaaga.
Waxaad go'aansan kartaa in sanad ka qaadan off iyo shaqeeyaan si loo badbaadiyo lacag. Waxaad heli doontaa waqti si ay baaritaan kulliyadaha iyo go'aan ka halkaas oo aad rabto in aad dalbato sanadka soo socda. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa si aad u hesho tababar goob shaqo ama tabarucidda duurka ku aad xiisaynayso. internship waa shaqo aan la bixin. waayo-aragnimo Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka heli in mar dambe codsan.
Dalbashada college noqon karaa geedi socod dheer. Qaado waxa talaabo talaabo. Xataa haddii adiga ama ilmahaagu ma heli, waxaa jira fursado kale.
Deeqaha waxbarashada ee soo galootiga
Sida loo bixiyo college
10 Talooyin loogu guuleysto dugsiga
Resources ee ardayda ah ee jiilka kowaad codsanaya college
Resources ee ardayda aan sharciga lahayn codsanaya college